forthepeople2009၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဘလော့များဆွေးနွေးချက်များအဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ forthepeople2009's Likes လက်ခံရထားသောလက်ဆောင်များ
aungaung leftacomment for forthepeople2009"ကောင်းသောနေ့လေးပါခင်ဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည်
နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးချမ်းသာ စွာဖြင့်
နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း…"Oct 27, 2012forthepeople2009 ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်Jul 3, 2012 ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား
12:22am အချိန်October 27, 2012, တွင်aungaung မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကောင်းသောနေ့လေးပါခင်ဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည်
နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့
လိုက်ပါတယခင်ဗျာ။ 2:30am အချိန်July 5, 2012, တွင်Mrs Stella Kwale မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ Good Day,
Mrs Stella. 2:56pm အချိန်July 3, 2012, တွင်ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။
Top News · Everything လှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for မူကြိုဆရာ"လေးစားရပါသော ဓမ္မအဆွေတော် မူကြိုဆရာ ခင်ဗျာ..။
မိတ်ဆွေ တင်သွင်းသည့် ကံချင်းတော့ မတူပါလေ ဘလော့သည်…"5 minutes agoမူကြိုဆရာ posted blog postsဆုတ်ခေတ်“ငါ့ဘ၀ဟာ တကယ်တော့ သူများအတွက် နေခဲ့တာပါ”ဝေဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မ6 more…1 hour agoanatta postedastatus"စေတနာပါ။ ဒါပေမဲ. ဘယဥာဏ်စဉ် မှ “အာယုဝန ဘယ“ ကို မမေ့စေခြင်ပါ။"1 hour ago 0
anatta, thar gyi and စောမင်းသူ joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺2 hours agoU Tin Zaw commented on ကိုညီညီတင်'s blog post '“မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် တရားတော်”'"တရားစကား တစ်ခွန်းဟာ အံ့မခန်းအကျိုးရှိပေစွ။အားလုံးသော တရားအလှူရှင်တို့အား…"3 hours agoU Tin Zaw commented on ကိုညီညီတင်'s blog post '"ဣနြ္ဒိယ သံဝရသီလ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း"'"သီလ အကြောင်းတွေကို ပုံဝတ္ထုလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြတာ သဘောကျပါ၏။ကျေးဇူးပါဗျာ။"3 hours agoKhin Myo Sint commented on ကိုညီညီတင်'s blog post '"ဣနြ္ဒိယ သံဝရသီလ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း"'"ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။မသိသေးတာသိရလို့ပါ။"4 hours agoU Tin Zaw commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဝေဒနာနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မ'"အစွန်းလွတ်ဖို့ နဲ့ အာရုံ နောက် အလွန် မလိုက်စေဖို့ဘဲ လို့ ထင်မြင်ယူဆပါတယ် ဆရာ။"4 hours agoU Tin Zaw commented on dimplemit's blog post 'သီလညစ်နွမ်းခြင်း၏ အကြောင်းငါးပါး'"လုံအောင် ထိန်းဖို့ဆိုတာ သတိမြဲ မှ ရမယ်ထင်တယ်နော်။ကျေးဇူးပါဗျာ။"4 hours agoU Tin Zaw commented on မောင်သိန်းထိုက်'s blog post 'ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ကျူးလွန်သူများရဲ့ အကျိုးဆက်'"လုံအောင်ထိမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါ၏။"4 hours agoU Tin Zaw commented on ကိုညီညီတင်'s blog post '"ဒါန ဆိုင်ရာ အဆိုအမိန့်များ"'"အသိတွေတိုးစေလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။အေးချမ်းသာယာပါစေဗျာ။"4 hours agoU Tin Zaw commented on thein wai's blog post 'အရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀..မလဲအောင် ချိန်လို့ရတဲ့ လက်ကိုင်လေး။'"ကောင်းလိုက်တဲ့ အဆုံးအမ။ရှိခိုးဦးတင်ပါ၏ ဘုရား။"4 hours ago More... RSS